Ganacsade caan ah oo Caawa lagu dilay Muqdisho Iyo Dableydii Dilka geysatay oo la hareereeyay.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wararka ayaa sheegaya in dableyda dilka geysatay ay dabagal ku sameeyeen ciidamada Amniga, kadiba ay galeen Guri ku yaalla xaafadda Macmacaanka, waxaana halkaasi ka dhacay is-rasaaseyn muddo socotay.
Ninkii dilka u geysatay ganacsadaha ayaa la dilay, waxaana sidoo kale meydkiisa loo qaaday xarunta CID-da, iyadoo muddo saacad ku dhow uu ku jiray goob Dugsi Qur’aan ah.
Ganacsadaha oo caan ka ahaa degaankaasi ayaa dilkiisa waxaa si weyn uga xumaaday dadka degaankaasi.
Previous articleDal Afrikaan ah oo Somaliya u soo diray in ka badan 100 Askari oo Boolis ah iyo Halka la geynayo
Next articleFAAHFAAHIN: Dabley toogasho ku dilay Ganacsade caan ah oo isna lagu dilay xaafad ka tirsan Muqdisho